I-SeaCliff Cottage yindlu yokulala epholileyo emibini ethe ngcu kwingxondorha e-St.Philip, eBarbados. Iimbono ezothusayo zolwandle kunye nokuzola zilindile, umgama wokuhamba ukuya kwindawo efihlakeleyo yeFoul Bay Beach, kunye nemizuzu emihlanu yokuqhuba ukuya eCrane Beach kunye neendawo zokutyela ezininzi. Le ndawo ithandekayo inedesika enkulu yangaphandle, ilungele ukuhlala ngaphandle kunye nokutya. Ngaphakathi ihonjiswe ngemibala emininzi eluhlaza okwesibhakabhaka, ine-wifi, i-smart t.v. ngeCable, kwaye omabini amagumbi okulala ane-air conditioning. Ipropati evunyiweyo yokuvalelwa.
Kwiliwa elineembono ezimangalisayo zolwandle. Nceda uqaphele ukuba i-10% yerhafu eyongezelelweyo karhulumente iya kongezwa kwindawo yakho yokuhlala.
Indawo yokuhlala kunye nezolileyo, ngelixa unxweme oluthandekayo lwe-foul bay ikumgama wokuhamba kucetyiswa imoto eqeshwayo. Sikwanayo nenkonzo yeteksi ethembekileyo enokuvuyela ukukusa naphi na apho ufuna ukuya khona ngexesha lokuhlala kwakho.
UCarolyn uyafumaneka ukuze akuncede ngayo nayiphi na into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho, uya kuhlangana nawe endlwini xa ufika kwaye ahambe nawe endlwini.